संगठन गठनका आधारहरू, सिद्धान्तहरू र तिनको समीक्षा (लोकसेवा टिप्स) – Rajdhani Daily
संगठन गठनका आधारहरू, सिद्धान्तहरू र तिनको समीक्षा (लोकसेवा टिप्स)
“Skeleten of Bureacracy”
‘An organization structure defined how job/tasks are formally divided, grouped and coordinated’
सामूहिक प्रयासद्धारा निर्दिष्ट लक्ष्य प्राप्तिका लागि सिर्जना गरिएको स्वरूप ।
Organization – Division of Labor, Source of Authority, Relationship
पूर्वनिर्धारित उद्देश्य हासिल गर्न मानिसहरूलाई एकापसमा संगठित गर्ने काम नै संगठन हो ।
संगठनात्मक स्वरुपले यस्को स्पष्ट खाका र मानचित्रलाई बुझाउँछ । संगठन स्वरुपभित्र संगठनको किसिम, पदसोपान, त्यसमा रहने कर्मचारीको पद तथा तह, उनीहरूको काम, कर्तव्य र अधिकार,उत्तरदायित्व, समन्वय र नियन्त्रणको अवस्था, सुपरिवेक्षण र त्यसको तहका साथै सञ्चार प्रवाहको अवस्थाको समेत स्पष्ट पहिचान गरिएको हुन्छ ।
धेरै विभाागहरू भएको
Non participatary Decision Making
संगठन गठनका आधारहरू
Purpose, Process, Place, Person and Policy
संगठन संरचना निर्माणका चरणहरू
भौतिक स्रोत साधन,
कार्यक्षेत्र र कार्यविधि
संगठनको निर्माण कसरी हुन्छ ? अधिकारको वितरण कसरी गर्नुपर्छ ? संगठनात्मक कार्यको नियन्त्रण कसरी गर्नु पर्छ ? भन्ने प्रश्नको जवाफ दिने क्रममा निर्माण गरीएका सिद्धान्तहरू नै संगठनका सिद्धान्तहरू हुन् । जसमा–
ऐक्यभावना र अनुशासन
नेपालको सार्वजनिक प्रशासनको संगठनात्मक स्वरूप
मन्त्रालयदेखि गाउँस्तरसम्म फैलिएको,
सैनिक संरचना सँग मिल्दोजुल्दो,
Bottom Heaviness मा आधारित छ ।
Bureaucratic Structure स्वरूपको,
Pyramid Type को,
संघीय र समावेशी स्वरूप उन्मुख छ ।
नेपालमा संगठनसँग सम्बन्धित समस्याहरू
Overlapping र काममा Duplication भएका (वन विभाग र वन अनुसन्धान विभाग)
Coordination गर्न गाह्रो
Empire Building गर्ने प्रवृति
ठूलो आकार र अनावश्यक विस्तार
काम नभए पनि विभागिय उपस्थिति देखाउनु पर्ने
आफू मातहत धेरै निकाय राख्न पाए हुन्थ्यो भन्ने प्रवृति
केन्द्र र तल्लो तह बिचमा अनावश्यक संरचना
संगठन निर्माणको निश्चित आधार पालना नगरिने
कामका लागि संगठन नभै संगठनका लागि काम खोज्ने
सबै संगठनका लागि एउटै निर्देशिका छ ।
बिनाकारण फेरबदल हुन्छ ।
मन्त्रालयको संख्यामा परिवर्तन भइरहने
विभिन्न सेवा समूहको विघटन र गठन
गलत नियतले डिभिजन कार्यालय बनाउने प्रवृत्ति
पदसोपानमुखी छ । ज्ष्भचबचअजथ मा जोड दिइन्छ ।
समन्वय र सञ्चार कमजोर छ ।
सेवा प्रवाह गर्ने ठाउँमा भन्दा केन्द्रमा बढी दरबन्दी छन् ।
आदेशको एकात्मकता छैन ।
क्षेत्रीय कार्यालयको भूमिका प्रभावकारी छैन ।
एउटै कामका लागि समेत विभिन्न निकायको गठन गरिन्छ । जस्तै ः विद्युत् प्राधिकरण र विद्युत् विकास विभाग ।
प्रशासन सुधारले केवल क्तचगअतगचभ सुधारमा मात्र जोड दिने
सरकारको कार्यक्षेत्र Define गर्ने ।
एउटै कार्यलयबाट धेरै किसिमका काम गर्ने फनेल संगठनको निर्माण गर्ने ।
काम र उद्देश्यको आधारमा मात्र संगठन निर्माण गर्ने ।
कार्यविवरण, जिम्मेवारी र उत्तरदायित्व स्पष्ट गर्ने ।
नियमित कामका लागि आयोजना गठन नगर्ने ।
एउटै कामका लागि धेरै संगठन नबनाउने ।
E governance मा जोड दिने,
पदसोपान कम गर्ने ।
नीतिगत तह Pyramid / Operating तह Flat बनाउने ।
निर्णय प्रक्रियामा सुधार गर्ने ।
संगठन साध्य होइन साधन मात्र हो ।
उद्देश्य र औचित्यका आधारमा मात्र संगठन निर्माण गर्ने,
खारेज गर्ने वा गाभ्ने गरौ ।
Work Culture को विकास गरौं ।
भविष्यपरक दृष्टिकोण अपनाऔं ।
निर्णयका तह घटाऔं ।
जिल्ला र गाविसको संख्या Review गरांै ।
संगठन निर्माण गर्दा जनतालाई केन्द्रविन्दुमा राखौं ।
Sound Organization त्यो हो, जहाँ Delegation of Authority, Responsibility, Competency / Flexibility हुन्छ ।
Tags: (लोकसेवा टिप्स)